Olivier Giroud oo ka warbixiyay sida uu yahay xiriirka kala dhexeeya tababare Frank Lampard – Gool FM
(London) 05 Seb 2020. Weeraryahanka reer France iyo naadiga Chelsea ee Olivier Giroud ayaa ka hadlay sida uu yahay xiriirka kala dhexeeya macalinkiisa Blues ee Frank Lampard, iyadoo ay jirto in kooxda ay sameysay xagaagan saxiixyo badan.
“Xiriirkii aan lalahaa tababaraha si cad ayuu isku badalay, markii aan raadineynay xalka dhibaatadayda ee ah inaan baxo, waxaan bilaabay inaan si fiican u barto isaga”.
“Waxaan wada yeelanay wadahadal kooban oo kaligeyn ah, waxaana u maleynayaa inuu sidoo kale bilaabay in sifiican uu ii barto, sidaas darteed xaalada aad ayey u fiicneyd”.
“Waan is aaminay. Wuxuu si cad iigu sheegay inaan fursad heli doono, kaddib marka la joojiyay kubadda cagta, waxaan ku soo laabtay kalsoonidiisii ​​aan ku qabay garoonka dhexdiisa, wuu ogyahay qiimaheyga iyo xirfadeyda”.
“Xiriir wanaagsan ayaan la leeyahay, laakiin tani micnaheedu maahan inuu aniga igu bilaabi doono ciyaar kasta, waa inaan sameeyaa wax walba inta lagu guda jiro tababarka si aan uga mid noqdo safka hore”.